Imibiko Vehicle Umlando
Ziningi abantu abangakwazi ukukhokhela ukuthenga imoto entsha, noma ukuthenga imoto lokuqala omunye izingane zabo. Akekho ofuna ukuthenga lemon, noma imoto ukuthi ubelokhu engozini embi, futhi wonke umuntu ufuna ukuthenga imoto pre-ephethwe ukuthi ucishe zisesimweni esihle. Uma uhlela ukuthenga imoto pre-ephethwe kukhona izinto eziningi ukuthi kudingeka ucabangele ngaphambi kokunquma lapho imoto ukuthenga futhi nokutshala imali. Mhlawumbe enye yezinto ezibaluleke kakhulu ongayenza ukuze uzivikele ukuthenga imoto okubi ukuthenga umbiko umlando imoto, eyaziwa nangokuthi isheke VIN.
Ngaphambi kokuthenga-pre izimoto kufanele kuqala ukuthola amaqiniso athile ayisisekelo mayelana imoto umbuzo ukukusiza isiqinisekiso sokuthi wenza utshalomali ohlakaniphileyo. Ingabe lokho imoto enhle uhlanzekile futhi ucwebezela nge umusi asanda injini bahlanza emkhunjini ukuthi wena ebuka lemon? Kwaba in a yemoto embi, noma mhlawumbe uye waba uzamcolo, noma okubi nakakhulu, siye yebiwe? Ngokuthenga umbiko umlando imoto egijima a VIN hlola ungakwazi kalula ukuphendula eminye yale mibuzo bese lonke okuningi.
A Lot ochwepheshe uzokutshela ukuthi kokuba umbiko umlando imoto imoto ukuthi ucabangela ukuthenga mhlawumbe omunye uhamba bayiziphukuphuku ungenza uma uthenga imoto. Ongeke wazi ukuthi kungenzeka ukuthi imoto ethize noma iloli abaye babhekana e kungcono esaphila. Ubungeke bamangala ukuthi ziningi kangakanani izinto angaluboni ngumuntu omkhulu ingaphakathi nengaphandle imininingwane yokuhlanza kanye nice, shiny, coat fresh kapende.
Imibiko umlando Vehicle kanye VIN amasheke ziyindlela enhle kakhulu ukuhlola irekhodi ithrekhi cishe wonke babesebenzisa izimoto namaloli. Le mibiko ukunikeza abathengi kanye irekhodi umlando izimoto esekelwe izimoto inombolo ye-serial (IWAYINI), futhi uhlole umlando imoto by VIN. A isheke inombolo VIN sizobonisa izinto ezivela DMV namarekhodi yomshuwalense, like kungenzeka odometer ukukhwabanisa, ukhumbula for ukuthi imoto futhi umthetho lemon ukuthenga imihlane, futhi okubaluleke kakhudlwana bona sizobonisa ezincane noma yacekeleka bashayisana. Ngezinye izikhathi ulwazi futhi atholakale yini noma cha imoto kwaba imoto imikhumbi noma lathengwa lwemikhumbi eziqashisayo car.
Vin Number Hlola
Kukhona amawebhusayithi amaningi online ukuhlola umlando imoto futhi ukwenza VIN inombolo search. Imibiko umlando Vehicle kanye VIN amasheke ayatholakala konke kusukela izimoto namaloli kanye SUV ukuba izithuthuthu, ATV sika (Zonke sezwe Izimoto) futhi Izimoto okuziphumulela (RV sika).
Singakanani le mibiko kubiza lihlukile othengisa ukuba othengisa futhi ngokuvamile emhlabeni $20 ukuze $40 dollar. The ones ukuthi ukukhangisa khulula kukhona ngokuvamile nje decoders, lapho thina uzothola kamuva. Ukuthenga umbiko umlando imoto kuyinto encane ukukhokhela kokuba abanye ukuthula kwengqondo ngokuphathelene imoto wena mayelana ukuthenga. Libuye libe imali encane ukukhokha uma kungase ugcine izinkulungwane zamaRandi nezinkinga imoto elungisa mechanical ngomgwaqo. Kaningi lapho othile ngokuthengisa imoto bona ngeke akutshele mayelana nezinkinga imoto. Ngisho nangemva test ukushayela imoto futhi ngifuna phezu kahle ngempela, ungase ngeke sithathe konke engalungile emotweni. Ngisho nalapho uthatha imoto umakhenikha yakho, bangamenzenjani miss izinto zonke manje bese.
Ngakho manje ungabona ukuthi kungani kokuba umbiko umlando imoto futhi ngokwenza isheke VIN kunjalo kubalulekile kakhulu. It kuyokusiza ukuba wenze isinqumo okwengeziwe imoto ucabanga ukuthenga. Ezimweni eziningi zibiza emhlabeni $20 ukuze $40 futhi lokho kwenza kube akukho brainer. It is a ngemali encane ngawe ukutshala ukuthi ngeke kukusize ugweme imoto ukuthi uhlezi esitolo ukukhanda njalo futhi ugcina kubiza wena a ton of imali.
Best Cheap Umlando Imibiko Car And Cheap Vin Hlola ku-